Maxay tahay doodda cusub ee ku saabsan xariga Mukhtaar Roobow? - BBC News Somali
Maxay tahay doodda cusub ee ku saabsan xariga Mukhtaar Roobow?
Image caption Mukhtaar Roobow ayaa horay usoo noqday afhayeenka Al-Shabaab
Iyadoo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur uu dowladda Federaalka Soomaaliya u xiran yahay muddo ka badan 3 bilood ayaa waxaa eedeyn loo jeediyay madaxda maamulka Koonfur Galbeed, Soomaaliya.
Waxaa dhawaan soo baxayay warar ku saabsan inuu socdo dadaal lagu doonayo in la sii daayo Mukhtaar Roobow oo la xiray isagoo isku diyaarinayay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed ka dhacday dabayaaqadii sannadkii lasoo dhaafay.
Maanta oo Talaado ah waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka dhoofay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ka dib markii uu muddo isbuuc ah ku sugnaa halkaas.
Abu Mansuur: Musharax cad-cad, haddana maxabuus ah
AMISOM maxay ka tiri xarigga Mukhtaar Rooboow?
Hase yeeshee, siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolkaas ayaa BBC-da u sheegay in uu dib u dhac ku yimid rajo laga qabay dhaqdhaqaaqyada ku aaddan sii deynta Mukhtaar Roobow.
"Axaddii lasoo dhaafay waxaa magaalada Nairobi shir ku yeeshay siyaasiyiinta golaha isbaddal doonka oo aan xulafo nahay iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, iyagoo ka wada qeyb galay gogol dib u heshiisiineed oo uu billaabay urur goboleedka IGAD, waxayna golaha isbaddal doonku soo jeediyeen in afar qodob la sameeyo, 1- in si shuruud la'aan ah lagu soo daayo Mukhtaar Roobow, 2- in dadkii ku waxyeelloobay qalalaasihii Baydhabo magdhow la siiyo, 3- in dib u heshiisiin guud la sameeyo, 4- in lasoo dhiso xukuumad tayo leh oo ay dadkoo dhan iska kaashadaan, laakiin nasiid darro heshiis la doonayay in uu Laftagareen shalay saxiixo ma uusan u xaadirin maantana wuu ka dhoofay Nairobi", ayuu yidhi Yuusuf Xasan Mursal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Waxaan caddeyneynaa in madaxweyne Laftagareen iyo dowladda Federaalku ay ka baxeen waddadii dib u heshiisiinta ee la rabay in lagu xalliyo dhibaatadii ka dhacday Baydhabo".
Dhanka kale BBC-da ayaa la xiriirtay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed, kuwaasoo beeniyay in uu jiray wax heshiis ah oo ku saabsan sii deynta Muktaar Roobow.
Lahaanshaha sawirka GooBJOOG
Image caption Laftagareen ayaa maanta soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay magaalada Nairobi
Waxaa BBC-da la hadlay wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Ugaas xasan Cabdi Maxamed oo qeyb ka ahaa wafdiga uu hoggaaminayay Laftagareen ee Nairobi ku sugnaa.
"19-kii bishan ayuu madaxweyne Laftagareen yimid Nairobi, wafdigiisana waxaa ku wehlinayay qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirrada, ujeeddada ugu weyn safarkiisana waxay ahayd sidii halkeeda looga sii wadi lahaa wadashaqeynta uu maamulka Koonfur Galbeed la lahaa hay'adaha kala duwan ee caawiya Soomaaliya, kuwaasoo 4 sano ay horay u wada shaqeynayeen, si ay mashaariicdooda usii amba qaadi lahaayeen. Ujeedka madaxweynuhu ma ahayn in shir lala galo siyaasiyiin ama uu ka qeyb qaato dhexdhexaadin ay IGAD waddo. wax xisbi siyaasadeed ah oo ka dhisan Koonfur Galbeed ama diiwaan gashan oo heshiisyo lala galayo ma jiraan", ayuu yidhi wasiirka.
Waxa uu intaas ku daray in Roobow uusan ku jirin gacantooda, isla markaana la ogyahay cidda uu u xiran yahay ee lagala xaajoon karo.
Mukhtaar Roobow ayaa xabsiga loo taxaabay bishii Disembar ee sannadkii lasoo dhaafay, xilli uu waqti kooban ka harsanaa doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, taasoo uu ka ahaa musharrax saameyn weyn leh.